Divergent, mutambo wekuva akasiyana munharaunda isingamuregerere. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fikisheni yesainzi, Vanyori, Type, Vechidiki Mabhuku, Novela
Divergent inyaya yevechidiki yakanyorwa naVeronica Roth, iye Nha. 1 munyori anotengesa zvakanyanya maererano ne New York Times. Iyo rongedzero yakanangana neicho chiri chega-chekuzvitsvakira icho vanhu vanorarama, kuziva kuti matarenda edu ndeapi, maitiro ayo anowanzo nguva dzose anotanga panguva yematambudziko aripo ekuyaruka. Iyi nganonyorwa iri mune ramangwana mune toni, yakaiswa muguta reChicago, yakasikwa ichifunga nezve zvazvingave mune ramangwana rekufungidzira umo vanhu vakapatsanurwa kuita zvikamu zvishanu: chokwadi, erudition, hukama, kushinga uye kuzviramba .
Ikoko tinoratidzwa mukadzi wechidiki anotarisana nesarudzo yakaoma: kusarudza runako rwake, kuti ave mumwe wemapoka mashanu, zvisinei, iye anoziva uye anonzwa kuti anogona kukura anopfuura rimwe chete. Mune iyo Divergent zvakasikwa zvinorambidzwa kuve neanopfuura ehumwe hunhu hunogamuchirwa, uye mhedzisiro yekuvandudza zvipo zvakasiyana inogona kuve yakaoma. Iyo nyaya yekunyepedzera yakagadzirwa naRoth panguva yekoreji makore.
1.1 Kuzvarwa nehupenyu
1.3 Munyori mukugadzirwa kwakazara
1.4 Mumasocial network
2.1 Iyo zano munzanga ye dystopi
2.2 Zera rekusarudza nzira yako
2.3 Chisarudzo chisingatarisirwi
2.4 Kurambidzwa kusiyaniswa
3 Kuzivikanwa pasi rese
4 Enda kune cinematography
5 Mabhuku emunyori
Veronica Roth ndiye munyori weAmerica Akazvarwa Nyamavhuvhu 19, 1988 mudhorobha reChicago. Muhupenyu hwake hwese, kunyangwe panguva yehudiki hwake, aikweverwa kumabhuku. Roth ainakidzwa nekupedza maawa mazhinji achiverenga nekunyora mumakore ake ekusekondari. Vabereki vake vaigara vachiziva tarenda rake, zvichimukurudzira kuti adzidze.
Ivo vakangwara vanofarira zvinyorwa, vanoda zvisikwa nemhuka. Zvakare iye mugadziri wenyaya inonakidza iyo yakabata mamirioni. Akaroorwa naNelson Fitch kubvira 2011.
Yakagamuchirwa kubva kuNorthwestern, uye achangopera kufemerwa kuburitsa bhuku rake rekutanga, iro raakatumidza kuti Divergent. Izvi, kunyangwe iri rake rekutanga basa, rakaenderera mberi kuva iro rakanakisa gedhi rekubwinya semunyori. Kubudirira kwake kwave kwakadaro zvekuti muna 2014 aive pakati pevanyori vanobhadharwa zvakanyanya.
Iyi novel yakanyorwa ini ndanga ndichidzidzira kunyora kunyora kukoreji. uye munyori mumwechete anovimbisa kuti mazano akagadziridzwa iye achityaira mota yake.
Munyori mukugadzirwa kwakazara
Roth munyori wazvino uye akagadzira nyika yakafanana kune dzese nyaya dzake. Parizvino anogara kuChicago nemurume wake nembwa, uye ari munyori wekunyora yakazara nguva. Mushure mekubudirira kwe Divergent, saga yakagadzirwa kuti mapoka mamwe mamwe mabhuku matatu.
Roth anorarama kunyora uye akaburitsa bhuku idzva rinenge gore rega rega, risingamire kubvira 2011. Basa rake razvino uno rinofanirwa kuburitswa muna Gumiguru 1, 2019, aine tarisiro huru kubva kuvateveri vake.
Unyanzvi hwakabatana nemapoka akatsanangurwa mubhuku reDivergent.
Roth munyori wazvino, akabvaruka pakati pemaawa marefu ekuuya nenyaya dzinoyevedza uye kurarama hupenyu hwakajairika. Pa pasocial media iwe unogona kazhinji kumuwana achigovana zvinhu kubva pahupenyu hwake hwezuva nezuva, mangwanani anofamba nembwa yake uye anofamba nemurume wake.
Anodawo kugovera maitiro ake ebasa pane ake Instagram (@vrothbooks), marongero aunoita hofisi yako uye zvaunofarira zvekudhirowa mahara. Iye zvakare anoratidza vazhinji kufarira kwake zvakasikwa uye nekuita zvekunze zviitiko.
Iyo zano munzanga ye dystopi
Iyi nyaya inogadzira nyika yayo pachawo munharaunda ye dystopi apo vanhu vakapatsanurwa kuita zvikamu zvishanu uye imwe neimwe yadzo inokudziridza hunhu hwakasiyana. Kune protagonist ane makore gumi nematanhatu, Beatrice Prior, achifunga zvekuita nehupenyu hwake, bato ripi rekujoinha, kana ichokwadi (kutendeseka), erudition (ungwaru), hukama (vane rugare), hushingi (hushingi) kana wega -kuramba (altruists).
Zera rekusarudza nzira yako
Vechidiki pavanosvika makore gumi nematanhatu zera munzanga ino, inguva yekusarudza boka rauri kuenda. Chinhu chinogamuchirwa munharaunda ndechekuti iwe urambe uri muchikwata mune mhuri yakoZvikasadaro, chingave chimiro chemhosva, zvisinei, wechidiki wega wega ane mukana wekusarudza.
Zano iri rinotanga kunetsa panosvika zuva rekuzvarwa regumi nematanhatu remutambi, Beatrice, asinga zive nechero bato raanozivisa. Kusava nechokwadi kunomubata nekusaziva hunhu hwaanenge ari, nekuti aigona kuve wemumwe munhu, uye pakupedzisira anopedzisira asarudza boka rinonakidza munhu wese, kusanganisira iye.
Verónica Roth, munyori weDhivergent.
Beatriz akarererwa mukati mechikwata chekuzvinyima icho chiri chemhuri yake, zvisinei, zuva rekunyepedzera mune chijana chake chekusarudza chikamu chake, anosarudza kuenda akashinga, nevane ushingi. Iye pachake haazive kana sarudzo yake yaive chaiyo uye zvese zvinotanga kuomarara.
Mukati mekuwanikwa kwake, protagonist anozvipa zita idzva uye anoenderera achizviti Tris., zita rinoenda zvakanyanya neboka rake idzva. Iyo nyaya inoitika pakati pemamiriro ekunyanyisa echikwata chedzidziso, kutyisidzira uye kudanana. Zvese kupedzisa nekunzwisisa kuti chii chinoshandura.
Munguva yekuitwa kwebhuku, Tris anotanga kuona kuti ane matarenda uye hunhu husingori chete nechikwata chake, asiwo inogona kuve yemamwe matatu: kuzvinyima, kushinga uye erudition; izvo zvinorambidzwa munharaunda yako. Uku kuwanikwa chikamu chekutyisa chinofanirwa kurarama, uchiziva kuti chakasiyana.
Musoro wenyaya ino unobata nenyaya dzakanangana nekuzviona semunhu, ziva matarenda uye hunhu hwauinahwo hwehupenyu, ndosaka zvichinakidza vechidiki.
Kuzivikanwa pasi rese
Iyi nyaya ine vatsoropodzi vakanaka kwazvo uye, pamusoro pezvo, yakagamuchira kucherechedzwa kwakakosha, senge iyo yakapihwa neNew York Times, kana ratidziro Divergent semutengesi. Uye hazvisi pasina, pamwechete neMitambo yeNzara, iri rimwe remabasa akanakisa emangwana akanyorwa.
Goodreads Sarudzo Mubairo 2011 weFavorite Book.
Bhuku rakanakisa ra2011, sekureva kweMushambadzi Wemavhiki.
Mukundi weGumi Gumi yeVachiri kuyaruka veYALSA 2012.
Veronica Roth mutsara.
Enda kune cinematography
Rinongova gore rimwe mushure mekuonekwa kwenoveli Divergent, Summit Varaidzo yakatenga kodzero dzebhuku uye muna 2012 kukanda kweiyo firimu vhezheni kwakatanga. Inotungamirwa naNeil Burger, iyo firimu yakaburitswa munaKurume 21, 2014.
Divergent. Chivabvu 2011
Vapanduki. Chivabvu 2012.
Akavimbika. Gumiguru 2013.
China: muunganidzwa wenyaya shanu nyaya dzinotaura nyaya yeCuatro. Chikunguru 2014.
Mavanga erufu. Ndira 2017.
Nzvimbo Dzakakamurwa. Chikumi 2018.
Kupera uye kumwe kutanga: nyaya kubva mune ramangwana. (Ichazobudiswa muna Gumiguru 1, 2019).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Divergent, Veronica Roth anotengesa zvakanyanya